डा. सुनिल श्रेष्ठको सुझाव, ‘शरीरलाई यसरी क्यान्सर प्रतिरोधी बनाउने’::kamananews
डा. सुनिल श्रेष्ठको सुझाव, ‘शरीरलाई यसरी क्यान्सर प्रतिरोधी बनाउने’
क्यान्सरको नाम सुन्नसाथ तपाई/हाम्रो आंग जिरिङ्ग हुन्छ । भन्छौं, ‘यस्तो रोग त सत्रुलाई पनि नलागोस् ।’
तर, हामीले कामना गरेभन्दा फरक छ नतिजा । प्रतिदिन क्यान्सर रोगी बढेका बढ्यै छन् । यसले विश्व समुदायलाई थर्कमान बनाइरहेको छ ।
क्यान्सरले किन दुनियालाई सताइरहेको छ ? यसबाट कसरी छुटकारा पाउने ? के शरीरलाई क्यान्सर प्रतिरोधी बनाउन सकिदैन ? यावत् प्रश्न हरेकको मनमा छ ।
वास्तवमा क्यान्सर छुटै रोग होइन । यो त सम्बन्धित रोगहरुको संकलन हो । यस्तो क्यान्सर जुनुसुकै उमेर समूहका मानिसको कुनै पनि अंगामा लाग्न सक्छ ।
कसरी शरीरमा क्यान्सर हुन्छ ?
हाम्रो शरीर फरक फरक आकार प्रकारका स-साना कोष तथा कोषिकाहरू मिलेर बनेको हुन्छन् ।
सामान्य अवस्थामा नयाँ बन्ने कोष तथा कोषिकाहरूको वृद्धिक्रम कोषभित्र रहेको डिएनएको कारण नियन्त्रणमा हुन्छ । तर, त्यस्ता कोष या कोषिकाहरु कुनै कारणबस खराबी उत्पन्न भएमा त्यो क्यान्सरको रुप बन्न जान्छ ।
क्यान्सर लागेको एउटा कोष या कोषिकाका् कारण नयाँ कोष या कोषिकाहरु पनि क्यान्सर नै लागेर जन्मन्छन् । विस्तारै कोष तथा कोषिकाहरुको उत्पादन अनियन्त्रित हुन जान्छ र स-साना गिर्खा बन्न पुग्छन् । यो एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा फैलने गर्छ । तर, क्यान्सर एक व्यक्तिबाट अर्कोमा भने सर्दैन ।
किन हुन्छ ? कसरी थाहा पाउने ?
कतिपयमा बंशाणुगत कारणले क्यान्सर लाग्ने गर्छ ।
अस्वस्थ्यकर खानपान, अव्यवस्थित जीवनशैली, वातावरणीय प्रदूषण पनि क्यान्सरका प्रमुख कारण हुन् । शारीरिक रुपमा निस्क्रिय दैनिकीले क्यान्सरको सम्भावनालाई बढाएर लाने गर्छ ।
संसारभरमा ६ जना मानिसको मृत्यु हुँदा त्यसमध्येको एक क्यान्सरपीडित हुन्छन् ।
विश्वमा हुने कूल मृत्युको करिब १३ प्रतिशत कारण क्यान्सरलाई मानिने गरिएको छ । जसमध्ये एक तिहाईलाई खानपिन र रहनसहनमा हुने असन्तुलनको कारण क्यान्सर लाग्ने गरेको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
क्यान्सर भएका अंगको प्रकृतिअनुसार फरक फरक लक्षण देखा पर्ने गर्छ । शरीरमा देखा परेको कुनै रोगको उपचारपछि एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म पनि निको नभएको अवस्थामा क्यान्सर भएको हुन सक्छ । यसबारे सजग हुन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा बढी कहाँ हुन्छ ?
विभिन्न अध्ययनले केही अंगको विभाजन गरेको छ जसमा सबैभन्दा बढी क्यान्सर हने गर्छ । जसमध्ये महिलामा स्तन, पाठेघरको क्यान्सर हो भने पुरुषहरुमा प्रोष्टेट क्यान्सर हो । यसबाहेक फोक्सो, घाँटी, छाला, ठूलो आन्द्रालगायतका क्यान्सर बढीभन्दा बढी हुने गर्छ ।
क्यान्सर कुन चरणसम्म निको हुन्छ ?
विशेषगरी क्यान्सर चार चरणमा देखा पर्ने गर्छ । क्यान्सर यस्तो रोग हो जुन पहिलो र दोस्रो चरणमा रहेका बिरामीलाई उपचारको माध्ययमबाट सजिलै निको पार्न सकिन्छ । तर, तेस्रो वा चौथो चरणमा पुगेपछि भने उपचारको लागि लामो समय दिनुपर्छ । तर, पूर्ण रूपमा निको पार्न भने निकै कठिन हुन्छ ।
कसरी शरीरलाई क्यान्सर प्रतिरोधी बनाउने त ?
– खानपान र जीवनशैलीको सन्तुलनबाट धेरै हदसम्म क्यान्सरको रोकथाम गर्न सकिन्छ । किनकी अस्वस्थकर खानपान र अव्यवस्थित जीवनशैलीले क्यान्सर हुनमा सहयोगी भूमिका खेल्छ । त्यसैले, स्वस्थ र सन्तुलित भोजन लिन जरुरी हुन्छ ।
– क्यान्सरबाट बच्नका लागि तनाव व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महतवपूर्ण हुन्छ । यसको लागि योग, ध्यानको साहारा लिन सकिन्छ ।
– धुम्रपान तथा मध्यपानलाई तत्काल त्याग्ने प्रण गर्नुपर्छ । यसकै कारण विश्वका अधिकांश मानिस क्यान्सरबाट शिकार हुनुपरेको छ ।
-स्तन क्यान्सरबाट सुरक्षित हुनको लागि आमाले बच्चालाई उचित स्तनपान गराँउन जरुरी हुन्छ ।
– हामीले स्वास्थ्य परीक्षणमा त्यति ध्यान दिने गर्दैनौँ । तर, क्यान्सरबाट बच्नको लागि नियमित स्वास्थ परीक्षण गर्नुपर्छ ।
यसो गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे राम्रोसँग जानकारी हुन्छ र कुनै रोग लागेको भए पहिलो अवस्थामा थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसपछि तत्काल उपचार गर्दा रोगले भयाभह रुप लिन पाउँदैन ।
लेखक नेपाल क्यान्सर अस्पताल, ललितपुरमा कार्यरत छन्